Sebemenyezelwe osaziwayo abazophatha uhlelo kuma-Samas | News24
Sebemenyezelwe osaziwayo abazophatha uhlelo kuma-Samas
Johannesburg – Kulindeleke ukuba ube sezingeni eliphezulu umcimbi waminyaka yonke wokuklomelisa ngezindondo abaculi abavelele, ama-South African Music Awards (Samas), njengoba sekumenyezelwe nosaziwayo abazoba ngabaphathi bohlelo uSomizi Mhlongo, ongumsakazi, kanye nosomahlaya uTumi Morake.
Umhlongo waziwa kakhulu ngezinhlelo zasemsakazweni, ikumabonakude kanye nemidlalo yase-theatre. Uzobe engaqali ukuphatha uhlelo kulo mcimbi njengoba nangonyaka odlule kwakunguyena ophethe uhlelo ebambisene nomunye usaziwayo ongumethuli wezinhlelo emsakazweni, uThando Thabethe.
OLUNYE UDABA:Asebuyele ‘ekhaya elidala’ ama-SAMA Awards
Ngakolunye uhlangothi uTumi Morake naye ukungusomahlaya oseke wawina izindondo kanti uyahlonishwa nanjengomethuli wezinhlelo kumabonakude.
Oyi-CEO yakwa-RiSA, okuyinkampani ehlela lomcimbi, uNhlanhla Sibisi, uthi ithimba labo lisebenza kanzima ukuhlanganisa lo mcimbi abalindeleke ukuthi ube sezingeni eliphezulu. Uthi bayabathemba kakhulu oSomizi kanye noTumi ukuthi bazokwazi ukuthokozisa izethameli.
Lo mcimbi wama-Samas uzoba ngomhlaka-27 kuMeyi kanti uzosakazwa bukhoma kuSABC1 ngo-20:00.